Global Voices teny Malagasy » Voasakana tany Goatemala ny WordPress.com · Global Voices teny Malagasy » Print
Voasakana tany Goatemala ny WordPress.com
Voadika ny 02 Febroary 2019 7:10 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Goatemalà, Lalàna, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
Manaiky ny zon'ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny alalan'ireto teny manaraka ireto ny andininy faha-35 ao amin'ny Lalàm-panorenana Politika ao amin'ny Repoblikan'i Goatemala : Azo atao ny maneho hevitra malalaka amin'ny alàlan'ny fitaovana fampitam-baovao rehetra tsy misy fanivanana na fanomezan-dàlana mialoha. Tsy azon'ny lalàna na ny didim-panjakana ferana ity zo ara-dalàmpanorenana ity .
Saingy, ankehitriny (2009) anefa dia toa tsy miraharaha ireo lalàna ireo ny mpamatsy tolotra aterineto CLARO/TELGUA , TIGO  ary Turbonett, izay mpamatsy tolotra aterineto malaza indrindra any Goatemala (ISPs). Nanao tatitra momba ny fanakanana ny fidirana amin'ny WordPress ireo mpisera Goatemalteka. Niantso ny sampan-draharaha misahana ny mpanjifa ary nibilaogy momba izany  i El Abismo de Tux ary nilaza fa tsy nahazo valiny mazava avy amin'izy ireo.
Nitatitra ny fidirana voasakana ho an'ny bilaogy maro nampiantranoin'ny WordPress i Demuexter . Nanameloka ny sivana tao Goatemala  Homo Homini Lupus ary bilaogy hafa sy sioka maro no nangataka ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra any Goatemala. Nitatitra  momba ny fanakanana ny WordPress ihany koa i Micha Micha.
Tsy mbola nitatitra ny zava-nitranga ny gazety lehibe indrindra ao Goatemala. Niantso ny biraon'ny mpiaro ny mpanjifa ny bilaogera hafa saingy valiny vitsivitsy ihany no azon'izy ireo. Ity fanakanana ity dia niseho taorian'ny krizy ara-politika tamin'ny volana lasa (May 2009), rehefa nampiasaina ny tambajotra sosialy hanaovana hetsi-panoherana  manohitra ny governemanta sy hitakiana ny rariny.
Eo ambanin'ny tenirohy #bloqueowp  no ahitanao ny vaovao farany momba izany ary nampiasa ny Herdict mba hitaterana ny momba ilay habaka voasakana  ireo Goatemalteka manampahaizana an-tserasera sasantsasany.
Antenaina fa hanatsahatra ny fanakanana ireo tranonkala ny manampahefana sy orinasa tsy miankina ka hanaja ny zon'ny mpanjifa sy olom-pirenena Goatemalteka amin'ny hoavy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/02/134385/
 nibilaogy momba izany: http://tuxtor.shekalug.org/?p=492
 sivana tao Goatemala: http://homohominilupus.wordpress.com/2009/06/28/%C2%A1censura-en-guatemala-bloquean-el-acceso-a-blogs-en-wordpress-com/
 nampiasaina ny tambajotra sosialy hanaovana hetsi-panoherana: http://www.boingboing.net/2009/05/12/guatemala-protests-f.html
 hitaterana ny momba ilay habaka voasakana: http://www.herdict.org/web/participate